GNOME 3.38 inouya nekuvandudzwa kweMutter uye kugadzirisa mashandiro | Linux Vakapindwa muropa
GNOME 3.38 inouya neMutter zvinowedzera, zvinowedzera mashandiro, uye zvimwe zvakawanda
Kwangopera mwedzi mumwe chete mushure kuvhurwa kwayo beta, nezuro, Gunyana 16, yakavhurwa GNOME 3.38. Icho chiitiko chitsva chikuru uye, sekudaro, chinouya nemabasa matsva, akati wandei akaunzwa mune yekutanga application, senge iyo kazhinji tabu yanyangarika uye kuti izvozvi zvese zvinogona kurongedzwa kana kugadziriswa zviri nyore. Uye zvakare, ivo vakapurudzira desktop, izvo zvinoguma nekuvandudza mashandiro ayo anowedzera mukuvandudza kubva v3.36.
Pakati pezvinhu zvitsva, app nyowani inomira ichatitungamira kuburikidza neGNOME desktop, asi chishandiso ichi chinogona kutadza kuoneka mune zvese zvinogoverwa. Uye isu hatifanire kukanganwa kuti GNOME ingori desktop, inosanganisira graphical nharaunda, kunyorera uye maraibhurari, asi ndiko kupihwa kunosarudza chekuwedzera uye chii chisiri. Pazasi iwe une iyo rondedzero yezvakakurumbira zvitsva ayo asvika neGNOME 3.38.
Pfungwa dzeGNOME 3.38
Chishandiso chitsva kutidzidzisa mashandiro ezvinhu zvese.
Yakagadziridzwa iyo yekutanga application.
Yakagadziridzwa rutsigiro rwevaverengi veminwe.
Iye zvino tinogona kutangazve komputa kubva pane imwe sarudzo nyowani yakaiswa mune system system.
Kubvira kwekuratidza bhajeti muzana pasina kuisa chero chinhu chinowedzera.
Kudzora kwevabereki kutsva kunotibvumidza, semuenzaniso, kudzora mabhurawuza ewebhu, zvimwe zvinoshandiswa kana kudzivirira maapps kuti aiswe.
Tsigiro yekugovana WiFi nemakodhi eQR.
Kuvandudzwa kwemapurogiramu, akadai seMepu, Mifananidzo, Clock, Epiphany kana iyo skrini app iyo zvino inouya neyakagadziridzwa interface.
GNOME yakavakirwa-mukati rekodhi rekodhi ikozvino inoshandisa Pipewire.
Rwiyo rwekurekodha rwakagadzirwazve.
Shanduko mumakrofoni icon kuti uzive kana iri kushanda kana kunyarara.
Mimwe mifananidzo yakagadzirwazve.
Wongorora manejimendi manejimendi muWayland yakagadziridzwa.
Kuburitswa kweGNOME 3.38, yaaniko codename ndiOrbis, zviri pamutemo, asi parizvino inongowanikwa chete mune fomu yekodhi uye chikamu chayo paFlathub. Kubva zvino zvichienda mberi ndidzo dzinogoverwa dzinofanirwa kuwedzera kune avo masystem, chimwe chinhu icho Ubuntu 20.10 chichaita muna Gumiguru 22 (yatove kuwanikwa muhusiku vhezheni). Rondedzero izere yeshanduko inowanikwa pa Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » GNOME 3.38 inouya neMutter zvinowedzera, zvinowedzera mashandiro, uye zvimwe zvakawanda
GNOME 40, inotevera inotevera yekuvandudza inotumidzwa zita kunzvenga nyonganiso
Kugoverwa kwakanyanya kweGNU / Linux kwe2020